Ngikhokhele Mkhokheli - izindabazokubhebhana - peperonity.com
peperonity.com » Sites » izindabazokubhebhana » Ngikhokhele Mkhokheli
Ngikhokhele Mkhokheli - izindabazokubhebhana
Ngikhokhele MkhokheliNgempela umkhokheli.Umkhokheli owaziwayo kuyo yönke indawo yakithi lona.Iyadushuzela into kaMaNxumalo uma ihamba.Awuyibuzi ngezingubo zayo ezinde ukuthi umkhokheli lona.Ulapha ko 48 years.Mina ngina 32.Ngimjwayele yena bandla umkhokheli.
"Uyabona wena mfana uma nibeka into phakathi kwenu akufanele ukuba kubekhona owesithathu phakathi kwenu."Ngithi ukudideka."Uma sibeka igama phakathi kwethu sobabili kufanele kube elethu sobabili.Akadingeki owesithathu."Ngidideke kodwa ngiphendule."Ngiyabona uqinisile."Aqhubeke,"Manje mina wena mfana anginayo indawo,kodwa umfundisi uzobe engekho ntambama uyoze abuye ekuseni. Ngizibone izinombolo manje."Woza ku 2 room wami."ngisho ngethukile."OK''anele asho lawomagama ngivalelise. Ngiyizwe ngempela i'knock'ku 2 room wami.Nginele ngivule asho phakathi umkhokheli.Ngivale ngikhiye.Ngingamlindi nokuba ahlale phansi.Ngimbambe sithintane ne ngemizimba.Ngimlande ngo'kiss'kube sengathi kade awulambela umka mfundisi.Angincele lomama uyezwa.
Ungixamalazele ngamathangakazi akhe. Uhleli sifendana ngiyampotoza amabele."Ooh...wu...waze wamnandi wemfana.Wabusiswa ngomthondo omnandi kanjena."ehefuzelela kimina.Lapho sengibhalanse ngezinyawo ngamisa amadolo.Ubufaxafaxa igolo nomthondo sesiyakhala sobabili.I'bedding' isimahlaphahlapha.Sekuze kwaphuma ngisho ishidi.Siyabhebhana. Usengibiza nango'sthandwa manje umkhokheli.Alale cu phezu kwami amabele omkhokheli abe sesifubeni kimina.Ngimkhave izinqe ngezandla.Angifende umkhokheli."Faxa!faxa!kukhala igolo kukhala umthondo.''Ngikhathele baba sengikhathele sithandwa,sengiyoze ngivukwe i'bp'."kukhala umkhokheli. "Khululeka mama...khululeka sithandwa sami...khululeka mkhokheli wami.Yimina ozofenda."Ngisho ngibe ngimbamba ngimqinisa ezinqeni.Ngifende ngesikhulu i'speed'kube sengathi ngisebenzisa umshini.Kube ubunsegensege umbhede.Answininize umkhokheli wami akhulume izilimi.
"Ooh...ooh waze wangibusisa wemfana.Kumnaandi...awu...awu...nakhoke...nakhoke...hhhhiiiii...!"Ngiwushaye ngisheshe kakhulu kunakuqala."Awu...nakhoke...nakhoke...awu nkosiyami ungifikisa kwenye indawo engingasayazi...seyamehlula umfundisi...ngiyachaaaaaaamaa..."Ngibhebhe ngisheshe kunjalo.Angikonofele answininize.Ngehluleke,"Awu mkhokheeeli...ngiyachaaaama..."Ngisho ngisifaze isidoda egolo lomkhokheli.Sikhale sibambane umthondo wami uchitha egolo likamkhokheli.Proceed to 'Awu bhuti'Back to 'True friends'izindabazokubhebhanaSend to a friendVote for this siteAuthor: Izindaba zokubhebhanaMessage to Izindaba zokubhebhanaOffer friendshipJust visitedAdd to favouritesMy favouritesReport pageTopicsFlirt & Datingarvindssitm.peperonity.comkhankimagifamily.peperonity.com